Sizang mi Army Officer teng ii thuatom « Nikonghong
Home » Sizang » Sizang mi Army Officer teng ii thuatom
Lt. Cin Do Nang @ Myo Myint Aung DOB: February 3, 1966
Birth Place: Myinmu
Parents: Tun Aung & Cing Za Uap
Education: Zoology 2nd year
Maj. Cin Kho Mang (BC 7504) DOB: 1934
Birth Place: Buanman
Parents: Wunna Kyawhtin Maj. On Ngin & Pau Neam
Education: BA BL
Maj. Cin Za Pau DOB: December 20, 1951
Parents: L. Tun Htawng & Vum Ko Dim
Education: B.Sc (Physics 1974)
Lt. Cing Khan Ciang DOB: November 27, 1971
Birth Place: Pumva
Parents: Maj. Tun Za Pum & Lun Za Cing
တပ်မတော် စစ်သူနာပြုအရာရှိ အဖြစ် နိုင်ငံတော် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။
Maj. Dr. Do Kho Thawng (BC 3392) DOB: April 15, 1919
Birth Place: Thuklai
Parents:Awn Thang & Ciang Cing
Education: M.B.B.S (1956)
Capt. Do Thang (BC 5164) DOB January 1, 1917
Birth Place: Limkhai
Parents: Tun Khup
Lt. Col. E.K Kim Ngin (BC 4077) DOB: May 5, 1924
Birth Place: Khuasak
Parents: Vum Thawng Pau Niangတပ်ရင်းမှူး၊ မအူပင် ခရိုင် ခလက ဥက္ကဌ၊ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌါနချုပ် တပ်မတော်ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌါနချုပ် ဦးစီး (ပ) ထောက်၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ ချင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီဥက္ကဌ၊ ချင်းပြည်နယ် ဒေသပါတီ ဥက္ကဌ။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဆင့် များဖြင့် နိုင်ငံတော်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Lt. Col. En Tual DOB: June 3, 1933
Birth Place: Suang Daw
Parents: On Lian & Cing Ciang
Lt. Col H Ngo Zam (BC 4084) DOB: July 13, 1923
Parents: Awn Thuam & Dim Huai
တပ်ရင်းမှူး၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ လမ်းစဉ်ပါတီ စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်၊
Lt. Hang Ko Khai (BC 54165) DOB: June 18, 1919
Birth Place: Suangdaw
Parents: Sing Kam
Capt. Hau Cin Mung (BC 23440) DOB: October 21, 1960
Parents: Thuam Kho Thawng & Ciang Kam
Education: B.A (His. 2004)
Capt. Hang Mang DOB: 1925
Parents:Kip Thuam & Ngiak Nuam
Maj. Dr. Hla Myaine DOB: March 31, 1926
Birth Place: Rangoon
Parents: San Min & Daw Hka
Education: M.B.B.S (1953)တပ်မတော်ဆေးတပ်ရင်း လောကတွင် ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး တပ်မှူး ဖြစ်သည်။ Lt. Col. J Suan Lian နှင့် 1958 ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ပြီး သမီး (၃) ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။
Maj. Kam Cin Lian DOB: July 12, 1955
Parents: Pau Za Lian & Niang Kam
Education: B.E (Mechanical 1978)
တပ်ခွဲမှူး နှင့် ခေတ္တတပ်ရင်းမှူး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပြီး စင်္ကပူ နိုင်ငံ သို့ ၁၉၇၈ နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်များတွင် ၄င်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ၄င်း သင်တန်းတက်ရန် နိုင်ငံတော်မှ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
Capt. Kam Za Nang (BC 6394) DOB: May 7, 1922
Birth Place: Theizang
Parents: Vum Sing & Vum Nuam
Capt. Khai Lian Cin Thang DOB: August 15, 1974
Parents: Suan Za Cin
Education: B.Sc, DSA Dip I ESP, D.I.L (II)
စစ်တက္ကသိုလ် (DSA) အမှတ်စဉ် (၃၈) ကျောင်းဆင်း အဆင့် (၉) ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်တွင် ၁၉၉၇-၉၉ အထိ ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ (English) တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၁)ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ (I.O)၊ (၂)တပ်မတော် (ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်း ကျောင်း (OTS)တွင် အင်္ဂလိပ်စာ ဌါနမှူး နှင့် ဗိုလ်လောင်း တပ်စုမှူး နည်းပြ၊ (၃) ဘဏ္ဍာ အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌါနတွင် ကုမ္ပဏီ အခွန်ရုံးတွင် အထူးအရာရှိ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ သြဂုတ်လ အတွင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌါန၊ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ်ရုံးတွင် Military Pamphlets ချီစစ်၊ တိုက်စစ်၊ ခံစစ်၊ ခွာစစ် တို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အရာရှိ သင်တန်းများတွင် သင်ကြားရန် အတွက် ပြုစုရေးသားခဲ့သည်။
Lt. Col. Khai Mun Mang (BC 5842) DOB: November 23, 1924
Parents: Khai Khup & Kim Niang
Passed Mariculation in Silong, India, study at St. John University, Calcutta, India and Rangoon University.
အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ၀ရမ်လေ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခဲယမ်းမီးကျောက် သင်တန်း မှ နည်းပြဆရာ သင်တန်း အောင်မြင်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း ပျောက်ကျားတပ် (မဟာမိတ်) တွင် တပ်စုမှူး၊ ချင်းကာ ကွယ်ရေး တပ်၊ ဂျပန်ခေတ် ချင်းမျိုးချစ် လူငယ် အဖွဲ့ အစည်းတွင် ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ပါဝင်ပြီး ယင်းအဖွဲ့၏ ဗဟို အဆင့် ဖြစ်သော ချင်း အမျိုးသား နိုင်ငံရေး ကောင်စီ အဖွဲ့ အတွင်းရေး မှူးအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တပ်ရင်းမှူး၊(ခဲယမ်းမီးကျောက်) တပ်ရင်းမှူး (ဗဟိုယဉ်သိုလှောင်ရေးတပ်) ချင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ ကောင်စီ ဥက္ကဌ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Capt. Khai Nang (BC 12562) DOB: July 8, 1965
Parents: Vum Za Cin & Vung Mang
Education: B.A (His. 2002)
Maj. Khai Za Pum DOB: February 8, 1939
Parents: Vum Zam & Vung Lian
နိုင်ငံတော် စစ်မှုထမ်းကောင်းတံဆိပ်၊ ပြည်သူ့စစ် တိုက်ပွဲဝင်တံဆိပ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေး တံဆိပ်၊ မိုင်းယမ်း/မဲသဝေါ တိုက်ပွဲဝင် တံဆိပ် တို့ကို ချီးမြင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည်။
Maj. Khai Kho Hau (BC 3925) DOB: December 5, 1914
Parents: Khup Lian (Lophei chief)
၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဦးတင်ဦး ( NLD ပါတီ) အပါအ၀င် စင်ကာပူ နိုင်ငံ Far East Land Forces တွင် သင်တန်းတက်ရန် (၁၂) ဦးစေလွတ်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
Capt. Kham Cin Khai (BC 4078) DOB: October 9, 1918
Parents: Rev. Za Khup & Ciang Zam
Education: Passed Matriculation in 1938 from Sagaing.
သံ အမတ်ကြီး ဒေါက်တာ ၀မ်းကိုဟော၏ ညီ။
Capt. Khup Tun DOB: January 9, 1968
Parents: Ngo Kho Khai (Buanman) & Cingh Pau
Education: B.A (His. 1999)
Capt. K A Khup Za Thang (BC 5377) DOB: March 24, 1923
Parents: Khai Khawm
ချင်း (ဇို) မျိုးနွယ်စု အဆင့်ဆင့် ဆင်းသက်ပုံ မှတ်တမ်းစာအုပ် ကို ပြုစုခဲ့သူဖြစ်သည်။
Lt. Lian Cin Pau (BC 9269) DOB: 1923
Parents: Thuam Cin & Nuam Cin
Capt. Lian Khaw Cin (BC 5379) DOB:
Parents: Khat Kam
2nd Lt. Lian Ko Hau (BC 5379) DOB:
Parents: Lian Thuam & Ciang Cing
Capt. Lian Ko Pau (BC 5161) DOB: 1918
Parents: Hau Mang
Capt. Lian Mang (BC 3983) DOB:
Parents: Hau Mang & Dim Hau
Lt. Lian Ngin (BC 5450) DOB:
Birth Place: Voklak
Parents: Pau Dong & Khai Nuam
Capt. Lian Pau (BC 17913) DOB: September 30, 1932
Birth Place: Lophei
Parents: Pau Thawng & Suan Cing
Education: BA (History)
Maj. R. Lua Kyin (BC 5274) DOB: December 2, 1924
Parents: Za Suan & Vung Ciang
တီးတိန်မြို့နယ် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေး ဥက္ကဌ (၁၉၈၁-၈၅) အထိ နိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသည်။
Capt. Lua Thawng (BC 4082) DOB: March 1, 1925
Parents: Suan Kam & Awi Cing
Education: BA Edn (I Class)
Capt. Mang Cin Mung DOB: January 15, 1963
Parents: Kim Ngo & Hau Zam Cing
Capt. Hmang Khai (Mang Khai) DOB: March 22, 1969
Parents: Mang Nang (Buanman) & Neam Ko Niang
Education: B.A (His 2003)
Capt. Mang Vum (BC 3984) DOB: 1907
Parents: Thuam On
Maj. Dr. Herbert Mangya Thang (BC 3293) (SAMA 588) DOB: July 16, 1909
Parents: Mang Lun & Khup Niang
Education: LMP (Medical school, Rangoon), M.B.B.S
Lt. Mang Za Lian(BC 5915) DOB:
Parents: Kam Lian
Capt. Mun Kho Pau (BC 3982) DOB: October 15, 1917
အိန္ဒိယ နိုင်ငံသို့ Army Signal Course တက်ရောက်ရန် ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ စေလွှတ်ခဲ့ဘူးသည်။
Capt. Nang Hen Pau DOB:
Birth Place: Ba Htoo
Parents: Maj. Cin Khaw Mang (Buanman) & J .Khaw Naw
Capt. Ngin Kho Mang (BC 5447) DOB: February 15, 1922
Parents: Sing Kam & Vung Cingh
Col. Ngo Cin Pau DOB: March 2, 1938
Parents: On Cin & Ciin Kam
Education: B.A (Psycho)
Officer Training School (OTS) အမှတ်စဉ် (၂၉) ဆင်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ်မှူး အဆင့်ဖြင့် ဒုတိယတပ်ရင်းမှူး အမှတ် (၂၂) ခလရ၊ ဒု- ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြင့် တပ်ရင်းမှူး အမှတ် (၁၁၆)ခမရ၊ စစ်ဦးစီးမှူး (ပထမတန်း) အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌါနချုပ်၊ တို့တွင် နိုင်ငံတော် တာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ဖြင့် နည်းဗျုဟာမှူး အမှတ် (၉၉) ခမရ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး တပ်မတော် ကိုယ်ခံပညာနှင့် အားကာ သိပ္ပံ၊ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး အထူးအရာရှိ၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အားကာ ၀န်ကြီးဌါန တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁)နိုင်ငံတော် စစ်မှုထမ်းကောင်း တံဆိပ် (၂) ပြည်သူ့စစ် တိုက်ပွဲဝင်တံဆိပ် (၃)နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးတံဆိပ် (၄) မိုင်းယမ်းမဲသဝေါ တိုက်ပွဲတံဆိပ် (၅)တပ်မတော် ဂုဏ်ဆောင်အမှုထမ်းတံဆိပ် (ဒု) ပ (၆)တပ်မတော်ဂုဏ်ဆောင် အမှုထမ်းတံဆိပ် (ပ)ဒု (၇)စစ်မှုထမ်းသက် တံဆိပ် (၈)နိုင်ငံ့အကျိုးဆောင်တံဆိပ် (၉) စစ်ပွဲတံဆိပ် (၇၄/၈၈) (၁၀)စစ်ပွဲတံဆိပ် (၈၈/၉၀) (၁၁)ရန်ငြိမ်းတံဆိပ် (၉၄) စသည့် ဘွဲ့တံဆိပ်များကို ချီးမြင့်ခြင်းခံရသည်။ အားကစားထူးချွန်သူ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကြက်တောင်ရိုက် လက်ရွေးစင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်မှ အားကစားနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားသို့ အောက်ပါ အတိုင်း စေလွှတ်ခြင်းခံရပါသည်။(၁)ဟောင်ကောင် နှင့် ဘန်ကောက် လက်ရွေးစင် ကြက်တောင် အားကစား (ဂျွန်လ ၁၉၆၃)(၂) မန်စီ၊ ကူမိန်း တရုတ်နိုင်ငံ (စက်တင်ဘာ ၁၉၉၀)(၃) ပီကင်း၊ ဟောင်ကောင် တရုတ် အမျိုးသား အားကစားပွဲတော် (စက်တင်ဘာ ၁၉၉၃)(၄) ဟောင်ကောင်၊ မက္ကအို ကမ္ဘာ့ ရိုးရာလှေလှော်ပြိုင်ပွဲ ခေါင်းဆောင် (ဂျွန် ၁၉၉၇)(၅) စင်္ကပူ 7th South East Asia and 4th Merlion Rowing Championship (June 1999)
Capt. Ngo Lian (BC 6104) DOB: September 21, 1920
Parents: Za Khup & Neam Mang
Capt. Ngo Lian (BC ) DOB:
Parents: Kham Vum
Capt. Ngo Pum (BC 5848) DOB: July 26, 1918
Parents: Khat Suang & Lam Ciang
Maj. Ngo Za Tuang DOB: September 16, 1955
Parents: Sing Za Cin & Cing Hau
Education: B. E (Mining)
Wunna Kyawhtin Maj. On Ngin (BC 8960) DOB: 1906
၀ ဏ္ဏကျော်ထင် ဘွဲ့ ချီးမြင့်ခြင်းခံရသည်။
Jemedar Capt. On Pum (BC 3974) DOB:
Birth Place: Lim Khai
Parents: Suak Ngo
Capt. On Za Cin DOB: November 22, 1932
Parents: Son Khaw Cin
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ကျိုင်းတုံ မိုင်းလား လေယာဉ် ခရီးစဉ် ပျက်ကျ ရာတွင် သေဆုံးခဲ့သည်။
Capt. On Za Nang (BC 5352) DOB: April 9, 1921
Lt. Pau Ko Hau (BC 5524) DOB:
Parents: Kam Kim
Lt. Pum Za Kam (BC 4076) DOB:
Parents: Ngin Zam & Khai Cingh
Maj. Salai Aung Mying (BC 18732) DOB: November 17, 1961
Parents: Ngo Khaw Pau
Capt. E. Sawm Hang (BC 15745) DOB: January 16, 1928
Parents: Lian Zam & Suang Dim
တီးတိန်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီ ဥက္ကဌ 1985 – 1988 အဖြစ် နိုင်ငံတော် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Maj. Son Kho Lian (BC 5114) DOB: 1920
Parents: Kaai Suang & Thuk Vung
ဒု တပ်ရင်းမှူး (စစ်တွေ၊ တောင်ငူ)ဥက္ကဌ (ချင်းရေးရာ ဦးစီးအဖွဲ့)နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် ပထမအဆင့်၁၉၇၃ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်
Col. Son Kho Vum DOB: January 3, 1929
Parents: Lam Ngo & Niang Dim
တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်မတော် ညိနှိုင်းကွက်ကဲရေးမှူး၊ ဒုတိုင်းမှူးပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်၊ ချင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီ ဥက္ကဌ တာဝန် များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Lt. Son Mang (BC 54935) DOB: July 1, 1919
Parents: Lamh Tun & Nuam Ciin
Lt. Col. Son Za Thang (BC 7468) DOB: January 18, 1929
Parents: Ngin Kam & Lam Cing
တပ်ရင်းမှူး ခလရ (၅၉)၊ လက်ထောက်စစ်ရေးချုပ် (စစ်ဌါနချုပ်) မကွေးတိုင်း ပြည်သူ့ကောင်စီ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေး ဥက္ကဌ၊ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Lt. Col Son Khaw Pau (BC 5066) DOB:
Parents: Huat Vum & Vung Kho Dim
မြန်မာ့တပ်မတော်သမိုင်းတွင် အသက်အငယ်ဆုံး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံရသူဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အားရွတ်ရွတ်ချွံချွံ အမြစ်ပြတ် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်း နိုင်သော်လည်း ထိုစဉ် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော (ကွန်မြူနစ်အလိုတော်ရိ) ၏ အမိန့် လှည့်ဖြားမှုကြောင့် အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းခွင့် ကို စွန့်လွတ်ခဲ့ရသည်။
Lt. Suak Za Kap DOB: September 28, 1957
၁၉၈၇ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့ ရှေ့တန်း တိုက်ပွဲ တစ်ခုတွင် တိုင်းပြည် အတွက် အသက်ပေးလှူသွားသည်။
Lt. Col. J. Suan Lian (BC DOB: August 2, 1927
Parents: Pau Tual & Dim Neam
Awarded Burma Star Medal (1939-45) Victoria Medal
Lt. Suan Pum (BC 54145) DOB: July 1, 1013
Parents: Jamedar Tun Zam & Kham Ciin
Capt. Suang Cin Lian (BC 19164) DOB: August 7, 1950
Parents: Thawng Ngin & Dim Niang
Education: B.A (1982)
Maj. Alexander Shuang Howe (BC 4094) DOB: August 1, 1922
Parents: Niab Commander Pau Cin & Ciin Mang
နိုင်ငံတော်မှ စစ်ပညာတော်သင်အဖြစ် အင်္ဂလန်သို့ စေလွှတ်ခဲ့ ဘူးသည်။
Capt. Suang Ko Hau (BC 5521) DOB: April 15, 1915
Parents: Lian Sing & Cing Vum
Capt. Suang Khaw Lian (BC 5995) DOB: July 13, 1922
Lt. Suang Piang (BC 5160) DOB: 1918
Parents: Hau Lian & Muan Vung
Capt. Suang Za Khai (BC 6705) DOB: February 22, 1926
Parents: Pau Cin & Ciang Kho Vung
Lt. Col. Dr. Suang Za Pau (BC 3438) DOB: April 28, 1937
Parents: Khai Ko Thang & Vung Mang
Education: M.B.B.S (1964), M.Sc (professor) ခွဲစိတ်ပါရဂူ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ဌါနမှူး၊ ခွဲစိတ်ကုသဌါနခွဲစိတ်ပါရဂူ၊ တပ်မတော်စစ်ဆေးရုံပါမောက္ခ၊ တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ်တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ဂေါက်သီး ပြိုင်ပွဲတွင် (၆) နှစ်ဆက်တိုက် ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၄ အထိ ပါဝင် ကစားခဲ့ပြီး ပထမဆုလည်း ရရှိခဲ့ဘူးသည်။ ၁၉၉၆ တွင် အငြိမ်းစား ယူပြီး Cronesia (USA) ကျွန်းတွင် ခွဲစိတ် ပါရဂူ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် သေဆုံးသည်။
Capt. Suang Za Pum (BC 6387) DOB: 1921
Parents: Lian Sing & Cing Vung
Capt. Thang Khaw Khai (BC 6832) DOB: July 24, 1924
Parents: Pau Zam & Khai Cingh
Jemedar Capt. Thang Ngo DOB: August 16, 1907
Parents: Mang Cin & Vung Dim
Capt. Thawng Mang DOB: October 20, 1934
Parents: Kip Lian & Pum Niang
Capt. Thawng Za Cin Hau (BC 5485) DOB: July 13, 1922
Parents: Son Thang & Ciang Hau
Lt. Col. Thian Khaw Khai (BC 3964) DOB: June 6, 1919
Parents: Suang Thang & Ciang Hau
Sino Burma Boundary Demarcation Treaty အဖွဲ့ဝင်တပ်ရင်းမှူး ( အမှတ် (၅၂) ခြေလျင်၊ အမှတ် (၃၃) ခြေလျင်၊ အမှတ် (၉၈) ခြေလျင်၊ ချင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး
Lt. Thuam Khaw Thawng (BC 55225) DOB: January 17, 1922
Parents: Suak Tun & Vung Ciang
Maj. General Tuang Za Khai (BC 5841)
DOB: July 1, 1927
Parents: Khan Lian & Lian Cing
Education: ရန်ကုန် ကူရှင် အထက်တန်းကျောင်းမှ (၁၀) တန်းအောင်မြင်ပြီး တက္ကသိုလ် ပညာသင်ကြားနေစဉ် မြန်မာတပ်မတော် ဗိုလ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) တွင် တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံရပြီး ၁၉၅၀ စက်တင်ဘာလမှ စပြီး ဒုဗိုလ် ရာထူး အဆင့်ဖြင့် အမှတ် (၄) ချင်းသေနတ်ကိုင် တပ်ရင်းတွင် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ဖြင့် အမှတ် (၆၆) ခြေမြန်တပ်မဟာဌာနချုပ် တပ်မမှူး၊ ၁၉၈၀ တွင် ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့်ဖြင့် အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌါနချုပ် တိုင်းမှူး၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ် အဆင့်ဖြင့် စစ်ထောက်ချုပ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌါန စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် နိုင်ငံတော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစာ ယူပြီးနောက် နိုင်ငံတော် စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ ဥက္ကဌ အဖြစ်ဆက်လက် တာထမ်းဆောင်ပါသည်။ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဘွဲ့ (ပထမအဆင့်)၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံ စစ်သေနာပတိချုပ်၏ (၁) Burma Star (၂) 1935-1945 Star နှင့် (၃) Victory Medal များဖြင့် ချီးမြင့် ဂုဏ်ပြုခြင်း ခံရသည့် အပြင် စစ်မှုထမ်းကောင်း တံဆိပ်ကို လည်း ချီးမြင့် ခြင်းခံရပါသည်။
Maj. Tuang Za Pum (BC 9559) DOB:September 7, 1940
Parents: Kok Kam & Nuam Kho Cing
Education: BA (D.S.A.)သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင် ချီးမြင့်ခြင်းခံရသည်
Capt. Vum Kho Pau DOB: July 7, 1930
Parents: Hang Kam & Son Cingh
တီးတိန်မြို့နယ် တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင် အဖြစ် နိုင်ငံတော် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Lt. Vungh Khai (BC 9229) DOB: June 9, 1926
Parents: Kam Tun
Capt. Vungh Pau (BC 9291) DOB: 1929
Parents: Liang Thawng & Ngaw Dim
Capt. Zam Cin Pau DOB: October 10, 1953
Parents: Cin Do & Nuam Ko Niang
Capt. Zam Khai DOB: February 8, 1969
Parents: Maj. Khai Za Pum & Rosy Vung Za Neam
Source: Sya Kim Thang
Hiatung aa list sungakihel ngawlaom tha le nong hesuakna taw nong zaaksak natu in hesuak hong ngen ing.
Haksatna tam mama kawmpan Sizang ngaalkap ulian teng ii list le photo hong kai khawm Sya Kim Thang tungah lungdamna lian mama ih nei hi.
Tags: Sya Kim Thang
By thawngno in Sizang on February 25, 2014 .
← Some Siyin Proverbs and Saying – Sizang Paunak Pawlkhat	Cash Ahibale Credit le Debit Card Ih Zak Ciang →
Major Lua Cin ih pianna pa min sia Za Son hingawl aa Za Suan hi zaw hi,anu min zong Vung Cing hingawl aa Vung Ciang hi.
Lungdam, Pa Thawngpui, kana en kik ta kana pua tu hi…
Cing Lian Hung says:
Ih phawk tu kilawm a, nong post uh sia lungdam. Khangthak te zongapil ,aciim tu in Pathian na thupha hongpia tahen!
Piang Mun Mang says:
Thu pi cip ei .. ling dam cip
Steven Mang says:
thu pi ee adang department tatuam te zong vawt lai Ooo
Hang za kap(kappu) says:
ko ma ki ciat x na hang hi vak i,ka pa hi sia sung na ki hel sak zo x khu hi.ka pa sia Bu Thian cin hi a.pian na sia khua sak khua hi.savum i vawt ma sak lai 1 vei na sia zgh ki hel x in,tuasia zgh ki hel zo x lai hi.apho to sia ka u dal sen kung ahi ba leh ka nu kung ah om tha tu hi.i om na khaw la ta nah hesuak na tawh na nah kan sak in maw.lung dam hi.
Sya Kim Thang ii khoptua sung panaki suaksak hi a, cing siat ngawl takpi tu hi,aki hel ngawl lai theampo hesuakna tawaki sam teng na heak uh babang nong thak natu hesuak hong ngen ing, nong thak peuma ciang kibelap tato tu hi….
Steven Kuntong.. says:
(1) Lt.col Kam Cin, (Khuasak) .(2) Capt Ngin Zam,( s/o Pu Khai Kam).(3) Capt Vum Tual (Khuasak) .(4) Bo Vum Kim (Khuasak). (5) Capt Pau Cin (Khuasak) .(6)Capt Ngo Cin Mang s/o Lian Ngo(Buanman).. tam ma ki sam lai tu um ing..